विश्वको दोस्रो ठूलो रुख बिरामी भएपछि सलाइनबाट औषधी
बिरामी मान्छेलाई सलाइनबाट औषधि दिनु त स्वभाविकै हो । तर के तपाइँले बिरामी रुखलाई सलाइनबाट औषधि दिएको सुन्नुभएको छ ? विस्तृतमा...
एक शक्‍तिशाली व्यक्तिले हेलिकप्टर नै काँधमा उठाएपछि …….
यो संसारमा अनौठा लाग्ने तर सत्य कामहरु भइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै एक त्यस्तो शक्‍तिशाली व्यक्ति जसले आफ्नो काँधमा हेलिकप्टर उठाउन विस्तृतमा...